Fandefasana horonantsary mivantana - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Sticky Post By Oliver Bienkowski Posted in ankapobeny Permalink
Fampivoarana rindrambaiko mivelatra amin'ny rindrambaiko mivantana
Sticky Post By Oliver Bienkowski On 4. Janoary 2016
Fanampiana mivelona an-trano. Software amin'ny fandrindrana hetsika amin'ny hetsika ho an'ny daholobe
Ny fametrahana ny teboka Mpanampy Live Stream ho be Help Software amin'ny toerana iray any Afrika Avaratra, izahay efa namorona zava-misy ho saha fitsapana ny tetikasa. Afaka hanova ny olana ankehitriny ny kaontinanta Afrikana miaraka amin'ny nomaniny ho solon'izay rindrambaiko. Ao amin'ny toerana famokarana ny fifandraisana isika noho ny nanaovako an'i maro ifandrimbonana asa. A manjaitra, ny welding toby, fanaova-mofo iray, ahidrano fambolena, tokony ho 3 km Network tariby mampifandray mba hampiseho ny farany sary ny velona famokarana 20 fakan-tsary amin'ny tsirairay ho an'ny mpijery mandrakariva.
15 metatra fiara fakan-tsary famolavolana any aoriana miaraka amin'ny loha camera 360Grad & Wlan
Sarotra be ny fitsangatsanganana an-tsaha, ny hividianana trano fa tsy mivarotra fotsiny
Ny lakozia fitsentsenana 23.06.18 dia tonga tany Maraoka
Nandao ny lakozian-tsakafo Progress isika ho an'ny olona 600 noana any Maraoka. Ny lakozia dia amin'ny fomba amam-panao mandritra ny tapa-bolana ary mbola mila mitranga isika, ny sandan'ny vola dia amin'ny 400 €. Ny sari-tany amin'ny alimo miaraka amin'ny fitaovana ho an'ny Spirulina Farm dia efa any Marrakech. Mikatsaka fambolena iray isika amin'izao fotoana izao hananganana toeram-pambolena Spirulina. Noho ny habetsaky ny donan'ny fanomezana avy amin'ny 2500 € amin'ny taona 2017, afaka mivezivezy tsikelikely amin'ny tetikasa isika. Manantena izahay fa ny hofan'ny 600-1200 € farafaharatsiny dia miankina amin'ny toerana misy ny toeram-piompiana. Koa satria mila internet 4G haingana isika dia tsy maintsy manao fitsapana haingana amin'ny tranonkala tsirairay, satria isika dia hiketroka atsy ho atsy 20 interne cameras internes, ary koa mandefa streams avy any ivelany mankany Facebook sy Twitch.
Ny tsy fahampian-tsakafo dia tsy dia lavitra loatra ny toeram-pambolena izay tsy nambolena teo ambony hazo oliva saingy manana toerana malalaka amin'ny herinaratra sy rano.
Efa nijery ny toeram-pambolena 10 izahay ary ny hany tokana izay mety dia natao hivarotana ho an'ny 80.000 € ary tsy ho an'ny hofaina.
Ny Custom 18.06.18 dia mbola mitazona ny lakozia, mora kokoa ny fanondranana ireo fiara
Tarehimarika ankehitriny & fampiasam-bola
Amin'izao fotoana izao dia efa nampiasa vola 25.000 izahay ho fitaovana ho an'ny Spirulina Farm sy 25.000 € amin'ny vidin'ny logistics, fiara fiara ary hitondra ny fitaovana ho an'i Afrika Avaratra.
Mila ny fanampianareo haingana araka izay tratra izahay mba handefa mivantana ny horonan-tsary 24 ora avy any Maraoka. Raha vao mavitrika ny Farm Spirulina, dia hitondra ny lakoziantsika miaraka amin'ny mpanamory fiaramanidina ho any Senegal isika. Tokony tsy hahazo fahazoan-dàlana ho an'ny fahaleovan-tena maharitra ho an'i Maraopa izahay fa handroso any atsimo mankany Maoritania, Senegal ary Gambia ary hanandrana any
mba hahazoana toerana sy maharitra. Toa mora kokoa ny manondrana fiara mifono vy mankany Afrika noho ny fanampiana fanampiana amin'ny maha-olona.
Fitaovana elektrônika ho an'ny famatsiana herinaratra amin'ny finday ao anaty livres
Kamerona ho an'ny 360 amin'ny finday iray. Fifandraisana Wi-Fi amin'ny fiara ho an'ny fampiasana finday ivelan'ny trano
Defender 11.05.18 & Caravaneo hitazona ny vidiny ambany araka izay azo atao any Afrika
Ohatra ho an'ny famokarana hosoka avy amin'i Spirulina mba tsy hananganana lavaka fantsona
Maha olona: ho toy ny traikefa ifandrimbonana mivantana LIVE, manova ny toe-ny fitsinjarana ambonin'ny Emoticons in Facebook. Zombies mahalala tsy misy firazanana, loko na Religion.Nur atidoha! Ny tetikasa Zombies without Borders dia mahita ny sehatra iraisam-pahaizana mivelatra amin'ny fanampiana. Ny anarana dia ny endriky ny solosaina finday maro izay voafehy ivelany. Ny tanjontsika dia tsy hafa fa vahaolana amin'ny maha-olona rehetra ifandrimbonana loza amin'ny alalan'ny fanampian'ny mpijery teo amin'ny renirano velona. Ny tanjontsika: 24 ora mivantana avy amin'ny onenan'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny mpanao gazety ao amin'ny ady faritra, ny maha-olombelona fizarana fanampiana amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana na mihaza ny mpihaza an-tsokosoko ao amin'ny Kruger National Park, ny mety nivangongo ny fanaraha-maso dia tsy manam-petra ny fitaovana: Ny fihetseham-po sary masina ny Facebook hifehy ny mpanampy nivangongo sy manapa-kevitra ny zavatra natao.
Ny tanjon'ny Zombies tsy sisintany dia any amin'ny toerana maro, amin'ny fampiasana ny teknolojia novolavolaina, anisan'izany ny akanjo fitondra mandeha amin'ny baoritra; Ny tranonkala WLAN ao anatiny, ny rindrambaiko mpanova-pitenenana interactive momba ny fanaraha-maso swarm, ny fanampim-bokin'ny RMTP Facebook amin'ny fanaraha-maso ny vondron'olona lehibe ho an'ny tanjona tsara amin'ny alalan'ny browser mba hamaha ireo olana lehibe amin'ny fotoana.
Ny toerana voalohan'ny livestream dia Senegal, Palestine ary ny tobin'ny logistics eto Maraoka. PixelHELPER dia te-hanolotra ny firenena hafa miaraka amin'ny fanampiana fanampiana maha-olona avy amin'ny vohikalan'i Maraoka. Teny an-dàlana mankany Madagasikara, te-hametraka toerana iray farafahakeliny any amin'ny firenena tsirairay isika. Ny toeram-pivarotana velona dia hanangana asa toy ny ala fambolena sy fiompiana miaraka amin'ireo mpitsoa-ponenana mba hanome azy ireo hoavy tsara amin'ny kaontinanta Afrikana. Ny zava-drehetra ao amin'ny livestream, ianao dia teo foana ary nanapa-kevitra ny amin'izay hitranga. Ny toerana tsirairay dia haseho amin'ny livestream mandritra ny andro, televiziona interactive miaraka amin'ny tanjona hanatsarana izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanampiana mivelatra. Ao Madagasikara, te hampiasa fitsaboana phage Georgiana isika mba hiarovana ny olona amin'ny lozam-pifamoivoizana izay misintona any isan-taona. Tamin'ny alalan'ireo fombam-pivavahana maty, ireo mponina ao amin'ilay nosy dia niverimberina nifanerasera tamin'ireo niharam-boina izay efa namono olona an-tapitrisany tany Eoropa tamin'ny Moyen Âge.
Fanampiana an-tserasera mivantana amin'ny lahatsary mivantana ao amin'ny navigateur.
Miasa ara-teknika izy io mba hanombohan-dresaka miaraka amin'ny fanaraha-maso mangarahara ary avy eo manasa ireo mpiasan'ny "Zava-miafina tsy misy fetra" ao amin'ny livestream. Noho izany dia manara-maso ny fizotran'ny fanaraha-maso iraisam-pirenena isika ary mihetsika haingana amin'ny fiovàna eo amin'ny loharanom-baovao eo amin'ny toeran'ny krizy.
2014-2015 no nanangona ny traikefa voalohany tamin'ny fanampiana mivantana an-tsokosoko
Sary Copyright: https://web.facebook.com/patryk.witt
Fampivoarana rindrambaiko mivelatra amin'ny rindrambaiko mivantana Febroary 3rd, 2019Oliver Bienkowski